इन्टरनेटको स्पीड कसरी थाहा पाउने ? | गृहपृष्ठ
Home प्रविधि इन्टरनेटको स्पीड कसरी थाहा पाउने ?
on: April 15, 2019 प्रविधि
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले दिएको इन्टरनेट स्पीड आफूले खरीद गरेकोभन्दा कम भएको हो कि भन्ने धेरैलाई लाग्न सक्छ । तर, इन्टरनेट स्पीड सोहीअनुरूप आएको छ कि छैन भन्ने जान्न समयसमयमा परीक्षण गर्नुपर्छ । इन्टरनेट स्पीड जति बढाउँदा पनि खासै प्रगति नभएको पनि हुन सक्छ । यस्तोमा सेवा प्रदायकले सबै ठीक छ भन्ने जवाफ दिने गर्छन् भने ग्राहकले बदमासी गर्‍यो भनेर आक्षेप लगाउने गरेको पाइन्छ ।
इन्टरनेट स्पीड सेवा प्रदायकले दिएबमोजिम नै हुन पनि सक्छ र नहुन पनि सक्छ । स्पीड टेस्ट गर्दा खरीद गरेबमोजिम नै भए कतैबाट आफ्नो इन्टरनेट ह्याक गरेको वा वाइफाइ पासवर्ड चोरी भएको भन्ने पुष्टि हुन्छ । यसो होइन भने आफ्नै कम्प्युटर वा डिभाइसमा समस्या छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
वास्तवमा इन्टरनेट स्पीड सजिलैसँग परीक्षण गर्न सकिन्छ । लाइन कनेक्शन वा वाइफाइदेखि कुनै पनि नेटवर्कमा कनेक्ट भएपछि त्यस नेटवर्कको स्पीड कति छ भन्ने कुरा जान्न सकिन्छ । इन्टरनेट स्पीड जाँच्ने थुप्रै मोबाइल एप, वेब एप, डेस्कटप एप आइसकेका छन् । यी एपमध्ये ‘स्पीडटेस्ट डट नेट’ र ‘फास्ट डट कम’बाट सजिलै इन्टरनेट स्पीड परीक्षण गर्न सकिन्छ ।
कम्प्युटरमा गूगल क्रोमको वेब ब्राउजर राखिएको छ भने यो एप निःशुल्क डाउनलोड गर्न सकिन्छ । साथै, ब्राउजरमै सजिलै एप एक्सटेन्शन पनि गर्न सकिन्छ ।
‘स्पीडटेस्ट डट नेट’ एन्ड्रोइड र आईओएस दुवै मोबाइल अपरेटिङ सिस्टमबाट पनि डाउनलोड गर्न सकिन्छ । ‘स्पीडटेस्ट डट नेट’ले नजिकैका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले होस्ट गरेका सर्भरको सहायता लिएर स्पीड मापन गर्ने गर्छ । इन्टरनेट स्पीड टेस्टले परीक्षण गरेको १–२ मिनेटभित्रै इन्टरनेटको डाउनलोड र अपलोड स्पीड देखाउने गर्छ । ‘फास्ट डट कम’ले भने डाउनलोड स्पीडमात्रै चेक गर्छ ।